#Nin $120,000 oo doollar kala baxsaday xujeydii uu ka ururiyay - Get Latest News From Horn of Africa
#Nin $120,000 oo doollar kala baxsaday xujeydii uu ka ururiyay
Golaha Culimada Islaamka ee dalka Kenya ayaa shaaciyay in Nin lahaa wakaalad socdaal ku lahaa xaafadda Islii ee Magaalada Nairobi.
Afhayeenka Culimada Golaha Islaamka Kenya ayaa sheegay in Ninkaasi oo ay magaciisa ku sheegeen Nuur Xasan Cabdi uu 30 qof oo Xujey ah ka ururiyay lacagtii ay ku xajin lahaayeen markii ay lacagta u gaartay $120,000 oo doollarna la waayay halka uu qabtay.
Mid ka mid ah dhibbanayaasha oo lagu magacaabo Ibraahim Maxamed ayaa sheegay in Ninkaasi uu gurigiisa ugu yimid una sheegay in uu heysto wakaalad diiwaangashan oo xujeyda u fududeysa soo saaridda Baasaboorrada iyo daabulidda Xajka laakiin markii uu aaaminay lacagtiina u dhiibay la waayay.
Dadka lacagaha lagala baxsaday ayaa u tagay hay’adaha Amaanka gaar ahaanna laanta dambi baarista Kenya.
Waxaa ay qaarkood sheegeen in Ninkaasi lagu wargeliyay in uu u baxsaday Dalka Koofurta Suudaan halkaasna ku dhuumanayo.
Golaha culimada Islaamka ee dalka Kenya ayaa cambaareeyay falkan waxaana ay ku sifeeyeen mid aragti xun ka bixinaya dadka Islaamka ah.